maskaxda kaasho kana jawaab su'aalahan? - Hoyga Aqoonta
maskaxda kaasho kana jawaab su'aalahan?
Nambarka Xubinka : 888
Taariikhduu xubinku is qoray golaha: Jul 2012
Wadanka : Hargeisa
ka qayb galka: 16
Waxaa la qoray : [ 09-09-2012 ]
hor-dhac- waa hubaal inaad ka jawaabto ama aad gadaal ka hesho jawaabahan insha allah
1. Su’aal- Waxaad sheegtaa Xayowaan dhala isagoo socda?
2 .Su’aal- Waxaad sheegtaa Noolaha keliya ee dhabarkiisa u seexan kara?
3. Su’aal- Sheeg magac loo bixiyo Hablaha Soomaaliyeed oo marka hore ama dib loo akhriyo isku mida ah ?
4 .Su’aal- Sheeg magac loo bixiyo ragga Somaliyeed ,oo ka kooban 6 xaraf oo hadii saddexada hore laysku xidho macnahoodu noqonayo wax dadka cuna, haddii saddexda danbbe laysku xidhona macnahoodu wuxuu noqonayaa wax dadku cunaan?
5. Su’aal- Waxaad sheegtaa waxa keliya ee haduu sii dheeraado sii gaabta?
Mowduucii hore : maskaxda kaasho kana jawaab su'aalahan? -||- Ka soo jeeda: -||- Qoraaga: Albukhaari
Warqad gaara u dir Albukhaari
Raadi qoraalladuu qoray/qortay Albukhaari
Jawaabta: maskaxda kaasho kana jawaab su'aalahan?
Anigoo ku faraxsan inaan noqdo qofka u horreeya ee ka jawaaba waxaan gartay magaca loo bixiyo hablaha oo horay iyo gadaal marka loo akhriyo isku mida waa (LuuL) Mahadsanid Albukhaari inta kalena ma garan.
magaca hablaha waa luul kan raga waaaa maslax
hadii aan isku dayo jawaabaha qaarkood magaca hablaha waa luul magaca ragga waa maslax waxa haduu dherado sii gaabanaya waa cimriga
noolaha keliyee dhabarka useexan kara waa bani aadamka haddaanan qaldaneyn mahadsanid albukhaari
xayawana dhala iagoo socda magaran
Taariikhduu xubinku is qoray golaha : Jul 2012
ka qayb galka : 16
mansha allah khayr ilaahay ha idin siiyo dhamaantiin,laakiin wali maynu gaadhi hadafkeenii wali waxaa ii dhiman jawaabo kale kkkkkkkkkkkkkkkkk waad ku mahadsan tihiin dhamaatiin si fiican ee aad ugu jawaabteen
Aniga oo kuu mahad naqaya Mudane Albukhaari qof kasta hadduu sidaadaas qoraalladiisa ula soconayo oo uu u soo af jarayo way wanaagsanaan lahayd. Mar kale ku mahadsanid wakhtiga aad na siisay.
aad, allah, ama, aslaamu, calaykum, dhabarkiisa, dhala, gadaal, hesho, hor-dhac, hubaal, inaad, insha, isagoo, jawaab, jawaabahan, jawaabto, ka, noolaha, sheegtaa, socda, su'aal, waa, waxaad, xayowaan
Madaxaaga kaasho Afrikaan Halxiraale & Xujooyin 13 09-06-2014 10:17 AM